China Sally အမှတ်တံဆိပ်သည်မြင့်မားသောစုပ်ယူနိုင်မှု ၃၅၀ မီလီမီတာ ၆ ခုနှင့်အတောင်များပါ ၀ င်ပြီးညဘက်အတောင်ပံများဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအသုံးပြုသည် Apex
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါ - +86 186 5091 8119
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမြင့်မားသော qua ...
Sally အမှတ်တံဆိပ်သည်မြင့်မားသောစုပ်ယူနိုင်မှု ၃၅၀ မီလီမီတာ ၆ ခုနှင့်အတောင်များပါ ၀ င်ပြီးညဘက်အတောင်ပံများနှင့်သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါများကိုအသုံးပြုသည်
ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားသန့်ရှင်းလက်သုတ်ပုဝါသည်အမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ 245mm သည်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ 290mm နှင့် 340mm သည်အမျိုးသမီးများည၌သုံးသောအခါစုပ်ယူမှုအလွန်ကောင်းသည်
ကာကွယ်မှု၏7အလွှာ
1. ဖောက်ထားသောပျော့ပျောင်းသော non- ယက်မြန်နှုန်း
anion ချစ်ပ်၏ 2.4လုပ်ဆောင်ချက်များကို
3. airlaid စက္ကူ
၄။ ဂျပန်မှ sumitomo SAP စာရွက်ကိုတင်သွင်းသည်
5. airlaid စက္ကူ
၆။ အသက်ရှူနိုင်သော backsheet
7. individul ရင်ခွင်
ထုတ်ကုန်အမည် Anion သန့်ရှင်းရေး Pad
ရရှိနိုင်သောအရွယ်အစား: 155 180/245/290/340/410mm
အမျိုးအစားများ: အလွန်ပါးလွှာသော၊ ပုံမှန် / Maxi (အတောင် / အတောင်မရှိ)
အဓိကပစ္စည်းများ ရက်ကန်းသားမဟုတ်သော၊ ပျော့ဖတ်၊ SAP၊ လေယာဉ်စက္ကူ၊ အသက်ရှုနိုင်သော PE ရုပ်ရှင်၊
စုပ်ယူ 60ml-250ml သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော၊
အတွင်းထုပ်ပိုး: 10pcs / အရောင်အိတ်
အပြင်အဆင် 24 အိတ် / ဘောလ်သို့မဟုတ် 48 အိတ် / ပုံး, တောင်းဆိုပေါ်မူတည်သည်
မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ Baby MOQ သည် 1 * 20ft ကွန်တိန်နာအရွယ်အစား / အရွယ်အစား 15.150000pcs၊ 1 * 40HQ ကွန်တိန်နာ / အရွယ်အစား4/ 400000pcs ပါရှိသည်။ အလေးချိန် pent နှင့်ထုပ်ပိုးအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်တင်စွမ်းရည်ကိုသတိပြုပါ။
OEM အတွက်ပုံသေအခကြေးငွေလိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၅၀ / အရောင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ သင်၏ထုပ်ပိုးမှုတွင်အရောင် ၅ ရောင်နှင့်အရွယ်အစား ၃ ခုရှိလျှင်၊ ဒေါ်လာ ၁၅၀ * ၅ * ၃ = ၂၂၅၀ ဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးသင့်ကုမ္ပဏီ၏သတင်းအချက်အလက်ရှိပါကအချို့သိုက်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်5* 40hq ကွန်တိန်နာများသို့ပေါင်းပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကုန်ကျငွေကိုသင့်ထံသို့ပြန်လည်ပေးမည်။
OEM ကိုမလုပ်လျှင် 20 ရက်အကြာတွင်အမှာစာအားလုံးကိုအတည်ပြုပြီးငွေလက်ခံရရှိသည်။ OEM လုပ်လျှင်နောက်ထပ် ၁၀ ရက်လိုအပ်သည်။
T / T, ငွေသား။
T / T သည် ကြိုတင်၍ ကြိုတင်မဲ ၃၀%၊ မပို့မီ BL / ၇၀% ကိုချိန်ညှိသည်။
ရှေ့သို့ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးချည်သား anion chip inတ္တီးသန့်ရှင်းရေးစွန့်ပစ်အိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါ Lady Pad
နောက်တစ်ခု: 290mm အရွယ်စုံသောအမျိုးသမီး pads anion chip သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူမဟုတ်သောယက်ထည် str ...
လက်ကားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် anion chip ကိုအမျိုးသမီး pads Sani ...
ရောင်းအားအကောင်းဆုံးတစ် ဦး တည်းသော Lady Maxi Woman Pad San ...
မြင့်မားသောစုပ်ယူနိုင်သည့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောခတန်း anion sanita ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါကသင်၏အီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။စုံစမ်းရေး
Conact: Joyce Wu +86 186 5091 8119
Quanzhou Apex တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ထည့်ပေါင်း - Unit803 block Wanda Plaza ရုံးအဆောက်အအုံအမှတ် ၈၈၈ Century Avenue Meiling Street၊ Jinjiang City Quanzhou Fujian China